Ogaden News Agency (ONA) – Imaaraadka oo Ciidamo Geeyay Jasiirada Suqadra.
Imaaraadka oo Ciidamo Geeyay Jasiirada Suqadra.
Posted by ONA Admin	/ May 5, 2018
Shacabka ku dhaqan jasiirada Suqadra ee u dhaw Soomaaliya ayaa ka mudaaharaaday ciidamo boqolaal ah oo ka tirsan kuwa Imaaraadka oo halkaasi la geeyey xili ay jasiiradaasi xiisadi ka taagan tahay.
Ciidamadan ayaa la sheegay inay la wareegeen Madaarka ugu weyn ee jasiirada ku yaala isla markaana kala direen ciidamadii dowlada Yemen ee halkaasi maamuli jiray. Xili jasiirada ay booqasho ku tageen wafdi uu hogaaminayo Raysalwasaaraha Yemen. Raysalwasaare Axmed bin Daghr iyo wafdigiisa ayaa Suqadra u tagay si ay u cambaareeyaan dhaq dhaqaaqa militari ee Imaaraadku ka wado jasiiradaasi.
Dowlada Imaaraadka ayaa xaqiijisay in Jasiiradaasi ay u direen afar diyaaradood oo sida boqolaal ciidamo ah, isla markaana ay qeyb ka tahay hawlgalka ay amniga ku sugayaan. Imaaraadka ayaa sidoo kale ku dooday in dowlada Yemen ay u saxiixday in Jasiirada Suqadra ay maamuli karaan illaa 99 sano ee socda. Heshiiskaasi oo uu muran ka taagan yahay.
Jasiirada Suqadra oo ku taala goob muhiim ah ayaa waxaa horey u maamuli jiray dowlada Yemen, walow ay Soomaaliya lafteedu sheegan jirtay, waxaana ku nool dad gaaraya 60.000 Yemeniin ah, sidoo kale waxaa ku nool Soomaali, jasiiradaasi ayaa sidoo kale ah goob loo dalxiis tagi jiray oo ay hay’ada UNESCO u aqoonsatay (World Heritage Site).